Shirwaynihii 8aad Ee Xog iswaydaarsiga Xukuumada Iyo Shacabka DDSI Oo Maalintii 5aad Galay - Cakaara News
Shirwaynihii 8aad Ee Xog iswaydaarsiga Xukuumada Iyo Shacabka DDSI Oo Maalintii 5aad Galay
Jigjiga(Cakaaranews) Sabti, 13ka May 2017. Waxaa maalintii 5aad galay shirwaynihii 8aad ee xog-iswaydaarsiga xukuumada iyo shacabka DDSI oo maalimihii udanbeeyayba kasocday hoolka shirarka madaxtooyada ee kaali.
Hadaba shirwaynahan oo uu hogaaminayo Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa wuxuu madaxwaynuhu si kooban usoo jeediyay qorshaha waxqabadka xukuumada ee ku aadan sanada 2010TI oo ku salaysan sidii loosii xoojin lahaa kaabayaasha horumarineed ee baahida aasaasiga ah oo ay ugu horeeyaan Biyaha, Beeraha Caafimaadka, Waxbarashada, Jidadka iyo qaybaha kale ee horumarineed. Wuxuuna madaxwaynuhu intaa kudaray in qorshahaas aan kor kusoo sheegnay sidii loogu talagalay loo fulin doono sanada 2010TI.
Soojeedin kadibana waxaa guriga lasoo dhigay filimaan daaawasho ah oo ka turjumayay xaalada soo yaalkii taariikheed ee 9kii sano ee udanbaysay, Iyadoo la isbarbar dhigayay xaaladii nabadeed iyo midii horumarineed ee kajirtay deegaanka islmarkaana tusaale lagusoo qaatay muuqaalo daawasho ah siday ahaan jireen 9 sano kahor iyo siday maanta yihiin magaalooyinka waawayn ee Jigjiga, Dhagaxbuur, Qabridahar iyo Godey, Iyadoo muuqaaladaasi kala turjumayeen horumar iyo horumar la aan. Sidoo kale waxaa muuqaalada daawashada ah kujiray mashaariicaha horumarineed ee ay xukuumadu sanadadii ugu danbaysay ka fulisay guud ahaan deegaanka.
Dhanka kale waxaa iyana fikirkooda ka hadlay qaar kamid ah odayaasha iyo dhalinyarta oo soo dhigay hadalo kamarakacaya xaaladii adkayd ee uu deegaanku ku suganaa 9 sano kahor iyo xaalada horumarineed ee uu maanta ku sugan yahay oo run ahaantii kaaf iyo kala dheeri ah. Waxayna intaa kudareen fikiro ay ku kordhinayeen qorshaha waxqabadka xukuumada 2010TI ee uu madaxwaynuhu soo jeediyay.
Ugu danbayna waxaa abaalmarino lasiiyay xubno kamid ah ciidanka gaarka ah ee liyuu policeka DDSI iyo xubno kamid ah odayaasha deegaanka, Kuwaasoo kaalin libaax ka qaatay aasaaskii ciidanka gaarka ah ee deegaanka.